Ho faty i Jesoa mba hamory... izay efa niely
Naseho ny : 4 avrily 2020
Sabotsy 04 aprily 2020 — Herinandro fahadimy amin'ny Karemy — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 11, 45-56 — Amorony fo madio aho, ry Andriamanitra ; amereno hafaliana avy amin'ny vonjinao.
Ry kristianina Havana, miresaka vondron’olona roa tsy mitovy eto ny Vaovao Mahafaly : andaniny, ireo mino an’i Jesoa, ankilany kosa ireo tsy mino. Dia jereo fa tsy mitovy ny fihetsika asehon’ireo eto. Ho an’ireo tsy mino, tonga teo ihany izy, fa ny anton-diany dia ny hitsikilo ny nataon’i Jesoa, ary avy eo, lasa nitati-bolana tany amin’ny Farisianina. Ny vokatr’io dia ny fikonokononana hamono an’i Jesoa. Mampanontany tena antsika izay hoe : inona tokoa no manosika antsika ho any am-piangonana ? Raha hitsikilo, hanameloka, hanakihana, hamono Fiangonana no hiafarany. Tandremo àry sao manana fahazarana amin’izany isika na mamboly toetra mitovy amin’izany ! Ho any am-piangonana ihany fa tsy finoana no mibaiko, hany ka vao mahita zavatra tsy mety iray dia tati-bolana no mahamaika fa tsy fandrosoana vaha-olana. Ny hiafaranao raha izany, dia ny hamono Fiangonana. Izay ho an’ireo tsy mino !
Fa ho an’iretsy mino kosa manao ahoana ? Dia henontsika tamin’ny Vaovao Mahafaly teo fa ho avy ny Pakan’ny Jody izay fety hiakaran’ny olona rehetra. Ka, ny resaka hifampiresahan’ireo dia hoe : dia tsy ho avy hamonjy ny fety ve Izy ? Maneho amintsika mianakavy izay hoe : rehefa tena mino, tsy mahazo aina raha tsy mahita an’i Jesoa ary mangetaheta te hahita Azy. Amin’ny fomba ahoana no hahatanterahan’izany amin’izao vanin’andro hiainantsika izao ? Dia tsy inona fa amin’ny alalan’ny vavaka sy fandraisana Sakramenta. Noho izany, mitovy amin’ny ireo olona te hahita an’i Jesoa ho avy hamonjy ny fety isika rehefa mandeha any am-piangonana ka entanin’ny fitiavam-bavaka sy ny hetaheta te handray Sakramenta.